10 Ọtụtụ ihe omume pụrụ iche Na The Netherlands | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Ọtụtụ ihe omume pụrụ iche Na The Netherlands
10 Ọtụtụ ihe omume pụrụ iche Na The Netherlands
Oge Ọgụgụ: 7 nkeji
(Emelitere ikpeazụ On: 04/06/2021)
Ọ bụrụ na ị dị nnọọ kwagara Netherlands ma ọ bụ na-eche echiche nke jumping na a ụgbọ okporo ígwè na nleta maka ụbọchị ole na ole, eleghị anya ị na-eche ihe na- 10 Ọtụtụ ihe omume pụrụ iche Na The Netherlands bụ. Ị ga-enwe obi ụtọ ịmata na e nwere ọtụtụ na-atụ anya, n'agbanyeghị ihe oge nke afọ ị gara.
Nakwa dị ka The Epic pop ememme, e nwere pụrụ iche Ihe omume pụrụ iche na Netherlands na ị gaghị ahụ n'ebe ọ bụla ọzọ: ememe ndị metụtara Dutch onyeeze, ákwà ifufe, na tulips. Ihe omume ndị a na-niile egwu ụzọ onwe gị obi ụtọ ma na-mikpuru na Dutch eme ihe!
Special Ihe Na The Netherlands 1: New Afọ Day amaba (Nieuwjaarsduik)
Nke a bụ otu n'ime ndị ihe omume pụrụ iche na Netherlands na-adịghị maka nāda # mbà obi! Ọ bụrụ na ị chọrọ na-amalite afọ ọhụrụ, iri a chilly amaba iwere na New Afọ Day (Ụbọchị Afọ Ọhụrụ). Nke a Dutch ememme malitere site a igwu mmiri club na 1960. Enwere 209 amaba ebe na Netherlands ị pụrụ a amaba. Ọ bụ ezie na, mmiri n'ime North Sea na Scheveningen, The Hague, bụ ndị kasị ewu ewu na ọnọdụ na ruo 60,000 ndị mmadụ. emesia, ama jijiji na-egwu mmiri na-n'ihu na a cup of erwtensoep, a na-ekpo ọkụ meaty agwa ofe.
Brussels ka Amsterdam Ụgbọ oloko
London ka Amsterdam Ụgbọ oloko
Berlin ka Amsterdam Ụgbọ oloko
Paris na Amsterdam Ụgbọ oloko
Special Ihe Na The Netherlands 2: Chinese New Year
Ị maara na Netherlands nwere otu nke kasị ukwuu Chinese obodo ke Europe? Anyị na-eche na kwesịrị nnọọ a ntụpọ na anyị n'elu 10 Ọtụtụ ihe omume pụrụ iche na Netherlands! Ha predominantly ebi Amsterdam, Rotterdam, na Hague, bụ nke a nso nke ihe adia na Chinese New Year. na Amsterdam, isi oche Square na Nieuwmarkt / Zeedijk ịhụ dragon parades, ọdụm egwú, na ezimezi oku. I nwekwara ike ịga pụrụ iche eme na De Bijenkorf ngalaba ụlọ ahịa, tinyere calligraphy noo, music arụmọrụ, na usoro tii, ma ọ bụ na Buddha temple utari Guang Shan Ọ Hua.
The ụbọchị bụkwa banyere nri, na na Amsterdam, i nwere ike iri tọrọ ụtọ nri n'okporo ámá mgbe ahịa, n'Oké Osimiri Obí (Europes mbụ sere n'elu Chinese restaurant), ma ọ bụ otu n'ime ọtụtụ ndị na Chinese ụlọ oriri na ọṅụṅụ tinyere Stormsteeg na Geldersekade. Na Hague, ị ga-ahụ Chinese ememme na atrium nke n'ụlọ ezumezu obodo ma na Den Haags Chinatown gburugburu Wagenstraat. Ị nwere ike ịchọta ihe ndị dị na Rotterdam eduga Chinese New Year, topped oyi site na a ụbọchị nke ememe gburugburu Chinese wijkpark na Old West na Westkruiskade Chinatown. Ọ bụrụ na ị bụ nkwenkwe ụgha, na Chinese New Year Eve eri a raw azụ salad (YU sheng) ime ka jisie ma ọ bụ fai hai, a ụdị ahịhịa mmiri, maka ọganihu. Gong XI Fa cai! (Ezi afọ ọhụrụ!)
Bremen ka Amsterdam Ụgbọ oloko
Hannover ka Amsterdam Ụgbọ oloko
Bielefeld ka Amsterdam Ụgbọ oloko
Hamburg ka Amsterdam Ụgbọ oloko
Special Ihe Na The Netherlands 3: Keukenhof (March Iji May)
The Keukenhof bụ achọghị ịzụ kasị ama ubi na Netherlands. Ịdị egwu na ọtụtụ nde multi acha tulips blooming na nke a mara mma Dutch park site na mbubreyo March ka ufọt May. The Keukenhof, nke pụtara kichin ubi, anọwo na ebe ọ bụ na narị afọ nke 15 na mkpuchite a whopping 32 hectare. Ụbọchị ndị a, na Keukenhof anabata 800.000 ọbịa kwa afọ.
Otu n'ime ihe nke 2018 isiokwu bụ gigantic ifuru bọlbụ Mozis, ekpuchi ebe 250m2 na esịnede 50.000 tulips, grape hyacinths, na crocuses. Gịnị ga-esote mbipụta abuana?
Dortmund ka Amsterdam Ụgbọ oloko
Essen na Amsterdam Ụgbọ oloko
Düsseldorf ka Amsterdam Ụgbọ oloko
Cologne ka Amsterdam Ụgbọ oloko
4: National Restaurant Week
Ọ bụrụ na ihe omume pụrụ iche na Netherlands na-agụnye free nri, i nwere ike ịgụ m na! na 50% anya, ọ bụ ihe fọrọ nke a na-ezu ohi! Gaa na nke a Dutch ememme maka foodies, ebe ị nwere ike iri nri na ụfọdụ n'ime ụlọ nri kacha elu na Netherlands maka ego efu.
Ọtụtụ narị na-ekere òkè ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ọtụtụ Dutch obodo na-enye a anya atọ N'ezie nri abalị menu maka ọnụego pụrụ iche nke 28,50 euro. Michelin starred ụlọ oriri na ọṅụṅụ ana ihe mmezi ego, ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị e depụtara na n'elu 250 na-achọkwa a obere emeju. Ma unu bụ ndị a foodie na a kpaara mmefu ego ma ọ bụ nanị ọchịchọ ịmata na-agbalị ụfọdụ dị iche iche mma iri nhọrọ na-enweghị etinye ukwuu nke a onu gị obere akpa, mgbe ahụ ị ga-n'anya Restaurant Week. Nke a pụrụ iche na-enye na-ewe ebe ugboro abụọ n'afọ na Netherlands.
Iji mee ka ọ dịrị ya mfe ka akwụkwọ a table, ndị na-ahazi nke ihe omume mere ka a ndepụta nke 500 ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-ekere òkè, kwa obodo, na Restaurant Week website.
Bonn ka Amsterdam Ụgbọ oloko
Aachen ka Amsterdam Ụgbọ oloko
Koblenz na Amsterdam Ụgbọ oloko
Frankfurt ka Amsterdam Ụgbọ oloko
5: eze Day (April 27)
Otu n'ime ndị kasị ihe omume pụrụ iche na Netherlands, ma ọ bụrụ na ọ bụghị otu n'ime ndị kasị fun na jupụtara, bụ On eze Day, which bụ King Willem Nke Alexander ụbọchị ọmụmụ. Dutch obodo nọrọ n'ụlọ n'okporo ámá ọzọ, àkpịrị ahịa, na-eme ihe, mbịne dum nke Netherlands n'ime nnukwu ememme nke afọ. I nwere ike maa tinye a ka otu n'ime ndị kasị ihe omume pụrụ iche na Netherlands! People gaba usọrọ, egwu music, eji akwa oroma, and have an all-round good, ma ọ bụrụ na ọ bụghị jupụtara, oge. Eze Night na-eme ememe n'abalị ahụ tupu Eze Day, na oriri ndi ozo na obodo na-adọta ndị mmadụ ìgwè mmadụ si kilomita gburugburu.
Osnabrück na Amsterdam Ụgbọ oloko
Lübec ka Amsterdam Ụgbọ oloko
Bremerhaven ka Amsterdam Ụgbọ oloko
Kiel ka Amsterdam Ụgbọ oloko
Special Ihe Na The Netherlands 6: ifuru
You hụtụla ebe dị mita itoolu n’ogologo, kpuchie na okooko osisi na gliding site na n'okporo ámá, kwadoro site na ihe ọ bụla ma manpower? Ọfọn, unu na-! ifuru Zundert na-kasị ifuru Nme na ụwa kpamkpam mere site ndị ọrụ afọ ofufo. Kwa afọ ọ bụla hamlet na-agba mbọ iru ihe ndị kasị mma n'elu mmiri ya mgbe ọ bụla wuru. Gaa na nke a pụrụ nnọọ iche omume na Zundert dị ka ị ga-bụkwanụ. Corso Zundert bụ ihe niile banyere ịhụ na, na na, ikwere!
Kassel ka Amsterdam Ụgbọ oloko
Mannheim ka Amsterdam Ụgbọ oloko
Fulda ka Amsterdam Ụgbọ oloko
Heidelberg ka Amsterdam Ụgbọ oloko
Special Ihe Na The Netherlands 7: Relief nke Leiden (Relief Of Leiden)
The 10 Ọtụtụ ihe omume pụrụ iche na Netherlands mkpa ịgụnye omenala, n'ezie. The omume nke Leiden bụ otu n'ime ha! Ọ bụ ememe ncheta Spanish nnọchibido na ụdi enyemaka nke obodo 1574. Leiden-aghọ otu nnukwu ememe maka ụbọchị abụọ a n'usoro. Enwe Nme, fun ngosi, ahịa, concerts, ọzọ, ezimezi oku, na omenala efere.
N'agbanyeghị funfair na ọtụtụ ọzọ, Leidens Ontzet bụ a ememe na ọtụtụ omenala na akụkọ ihe mere eme pụtara. N'ụtụtụ nke atọ October amalite na reveille na n'ụlọ ezumezu obodo. Free azụ asa na-acha ọcha achịcha na-ahụ nyere si na Leiden Waag. Ị nwere ike mgbe ahụ na-enwe a musical nzukọ na Van Der Werf park na ọrụ ke Pieterskerk. Na mgbede ndị mmadụ omenala eri a karọt na yabasị ya ofe akpọ Hutspot. The ememe akwụsị na-akwa firework show.
Trier ka Amsterdam Ụgbọ oloko
Luxembourg ka Amsterdam Ụgbọ oloko
Antwerp ka Amsterdam Ụgbọ oloko
Ghent ka Amsterdam Ụgbọ oloko
Special Ihe Na The Netherlands 8: ụgbọ mmiri Amsterdam
Ụgbọ mmiri omenala amalite na Nme: ọtụtụ narị ụgbọ mmiri na-abanye n'ime IJ ma mepụta ọhụụ pụrụ iche nke ị na-agaghị echezọ ma ọlị. Na ndị na-esonụ ụbọchị, ọtụtụ ọkụ na mmiri na-ahụ ebe, na nsonye Skutsjesilen(ụgbọ na a typical Frisian ship). The Royal Netherlands Navy will also display its skills on the water.
Next nile ọrụ na mmiri, e nwekwara ọtụtụ ihe ha na wharves, nke na-eme ya otú ahụ pụrụ iche. The ụgbọ mmiri omume obụrede mbụre ntụrụndụ, art, omenala, music, na egwuregwu na ụmụ na-eme.
Ụgbọ mmiri Amsterdam emesi otu nnukwu na-enweghị atụ nsoro nke ogologo mmiri, gara nketa craft, oge a ụgbọ mmiri na, naval mmiri, na replicas.
Liège ka Amsterdam Ụgbọ oloko
Leuven ka Amsterdam Ụgbọ oloko
Bruges ka Amsterdam Ụgbọ oloko
Oostende ka Amsterdam Ụgbọ oloko
Special Ihe Na The Netherlands 9: Tenting Days
Special campsites, ọnụ maa ụlọikwuu, , maa ụlọikwuu na anụ kwere omume na Netherlands n'oge Tenting Days (Site gị tent). The nzukọ nke Tenting Days akwado ọtụtụ mmekọ. Ya bụ; maa ụlọikwuu Sites, ndị Society maka ichebe Natural ncheta na Netherlands, nakwa dị ka ohia Commission. Ị na-nyere ohere mara ụlọikwuu na ndị kasị akpali, ọnụ ala, na ebe ohia nke Noordoostpolder. Ọ bụkwa ibu fun n'ihi na ndị okenye na ụmụaka myiri!
Genk ka Amsterdam Ụgbọ oloko
Hasselt ka Amsterdam Ụgbọ oloko
Namur ka Amsterdam Ụgbọ oloko
Kortrijk ka Amsterdam Ụgbọ oloko
Special Ihe Na The Netherlands 10: Parkpop
Parkpop bụ otu n'ime ndị kasị ibu pop ihe ndị mere na Netherlands, ẹkenịmde kwa afọ na nke ikpeazụ Sunday nke June. Gịnị na-eme ya otú pụrụ iche, bụ na ọ bụ kpam kpam free!
A mgbe ihe omume kemgbe 1981, a mba pop ememme tinye The Hague na map. N'ihi free music ememme na nnukwu ọnụ ọgụgụ. N'ihi na ọtụtụ afọ, ọ bụ ọbụna ndị kasị ibu free pop music ememme niile nke Europe! I nwere ike na-atụ anya n'elu 350.000 ndị mmadụ na a egwu ememme.
Ọ bụrụ na ị na-na-abịa site n'akụkụ ọzọ nke The Hague, ọ bụ oké echiche na-okirikiri ka ebe mgbakọ na Zuiderpark.
Brussels ka The Hague Ụgbọ oloko
Antwerp ka The Hague Ụgbọ oloko
Ghent ka The Hague Ụgbọ oloko
Brugge ka The Hague Ụgbọ oloko
Anyị aha ya bụ na 10 Ọtụtụ ihe omume pụrụ iche na Netherlands, ma e nwere ọtụtụ ndị ọzọ. Banye a ụgbọ okporo ígwè na-enyemaka nke Save A Train na-ahụ maka onwe gị!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “10 Ọtụtụ ihe omume pụrụ iche Na The Netherlands” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fspecial-events-netherlands%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Train Travel Austria, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Train Travel Hungary, Inzọ Njem Italytali, Zụọnụ Ndụmọdụ, Travel Europe
The First Train Njem Ever Mere Na Italy
Njem ụgbọ oloko, Inzọ Njem Italytali, Travel Europe
10 Awesome Ezumike mgbazinye Places Na Europe
8 Ezumike kacha mma ụbọchị ọmụmụ
10 Di na nwunye a kacha acho
Top 10 Ebe Nzuzo Na Worldwa
7 Hụnanya Na-aga Ebe Niile